भारतमा संसदीय लोकतन्त्रको सुरुवात १९४७पछि भयो र आजपर्यन्त भारतको शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छैन अर्थात् ७० वर्ष लामो संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भारतले गरेको छ । भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका नेता महात्मा गान्धी र प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू समेत समाजवादी व्यवस्थाबाट प्रभावित थिए भने इन्दिरा गान्धीको त आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा संविधानको बयालिसौँ संशोधन मार्फत् प्रस्तावनामै सोसियलिस्टिक, डेमोक्रेटिक एन्ड सेक्युलर इन्डिया भनेर उल्लेख भयो भने सो प्रस्तावनाको कार्यान्वयनस्वरूप गान्धीले १४ वटा निजी बैङ्कहरूलाई सरकारीकरण समेत गरिन् ।
नेपालले २०७२ को संविधानको प्रस्तावनामा “लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संविधान सभाबाट पारित यो संविधान जारी गर्दछौँ” भनी उल्लेख गरेको छ । संविधानले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा धारा ५० को उपधारा ३ मा “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” भनेर उल्लेख गरेको छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा तिनै दलहरूको संविधान सभामा बहुमत थियो, जो २०४६ सालको दशकमा नेपालमा नव उदारवादी नीतिका कार्यान्वयनकर्ता पनि थिए । २०४६देखि हालसम्म सत्ताको सधैँ केन्द्रमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई आज खुम्चिएको प्रतिपक्षमा रहँदा डाक्टर केसीको पछिल्लो सत्याग्रहले समाजवाद सम्झिने ठाउँमा पुर्‍याइदियो । तर गत २७ वर्षको राजनीतिक यात्रामा काङ्ग्रेसले आफूलाई निजीकरणको प्रबद्र्धक बनायो । उद्योगहरू फटाफट निजीकरण गर्‍यो । सार्वजनिक शिक्षाप्रति चरम उपेक्षाको नीति अपनायो भने बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको निजी लगानीलाई आफ्नो उपलब्धि बतायो । यस्तो काङ्ग्रेस २७ दिनमा समाजवादी कसरी बन्यो ? यतिबेला उदारवादी काङ्ग्रेसी अर्थशास्त्री पर्दाबाट एकाएक कसरी गायब भए ? त्यस्तै युवा नेतादेखि देउवासम्म बी.पी. का अनुयायी बने ?
राजनीति नगरेको दावी गर्ने सत्याग्रहीको २७ दिनले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको २७ वर्षे दासलाई समाजवाद सम्झायो भने माक्र्सवाद भुलेर मार्सीभातवाला माफियाकरणमा छलाङ मारिरहेकाहरूलाई न्यूनतम वामपन्थी बन्न समेत परेको कठिनाइँ सिकायो । यस प्रकारको राजनीतिक पाठलाई विराट् नै मान्नु पर्छ । यस प्रकारको परिदृष्यमा अर्थशास्त्रको सामान्य प्रश्न यो छ– के यो समाजवादको अभ्यास हो वा संसदीय सर्वसत्तावादको ? यसमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न २०४६ को दशकबाट नै सुरु गरौँ, जब निजीकरणको युग आरम्भ भयो अर्थात् नेपालमा २०४६ को आन्दोलनपछि २०४८ सालको सरकारले सो नीति अवलम्बन गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट कुनै पनि लाभ लिन सक्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र नभएको, कर प्रणाली व्यवस्थित नभएको अवस्थामा सो नीतिले केवल देशको उत्पादनमा असर गर्‍यो । व्यापार असन्तुलन बढायो । यही अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी, त्यसमा पनि व्यवस्थापन सङ्कायका बी.बी.ए. र एम.बी.ए., इन्जिनियरिङ, चिकित्सा जस्ता कोर्सहरूमा पार्टीका नेताहरू नै सञ्चालक बन्ने होड नै सुरु भयो, जसले गर्दा माफियाकरणको अवस्था देखा पर्‍यो । अझ ती कोर्सहरू प्राप्त गर्नेहरूमा मोनोपोलिस्टिक बजार अवस्थाको मनोरञ्जन त छँदै थियो ।
समाजवाद त्यस्तो राजनैतिक वा आर्थिक प्रणाली हो, जहाँ व्यक्तिगत सम्पत्ति वा लगानीको बदलामा सामाजिक वा सामूहिक सम्पत्ति वा लगानीको अपेक्षा गरिन्छ । पुँजीवादको चरम अवस्था साम्राज्यवादी उपनिवेशबाट प्रताडित भारतले आफ्नो मुक्ति आन्दोलनताका पुँजीवादको तत्कालीन अर्थनीति औपनिवेशीकरणका विरुद्ध लड्न समाजवादी कार्यक्रम रोज्यो र त्यसैको प्रभाव नेपाली नेताहरूमा समेत पर्‍यो । तर २००७ सालतिरको त्यो प्रभाव २०४६ सालतिर आइपुग्दा उतारचढावका बीच भग्नावशेषमा पुग्यो भने त्यसयताका २७ वर्षमा काङ्ग्रेस यो विचार सम्झन जरुरी ठान्ने ठाउँमा रहेन । किनकि उसलाई सत्ता पुगिसरी थियो । तर गोविन्द केसीको २७ दिने सत्याग्रहको मौका पारी उसले आफ्नो पुरानो विचार सम्झियो । माक्र्सवादलाई दूरदूर देख्न नसक्ने विद्धानहरू नेकपालाई माक्र्सवाद सम्झाउने भए । अब प्रश्न उठ्छ, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको आर्थिक कार्यक्रम के हो ? के उनीहरूले राष्ट्रिय पुँजीको विकासबारे सोचेका छन् ? ठुलो अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्या भएका मुलुकहरूका बीचको मौलिक आर्थिक प्रणाली के हो ? तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सिद्धान्त लागु भएको छ त ? के उनीहरूलाई अमेरिका र चीन जस्ता देश समेत खुल्ला बजार नीतिमा होइन, संवेदनशील संरक्षण नीतिमा आफ्नो व्यापार सम्बन्ध कायम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको हेक्का छ ? त्यसो हो भने हाम्रो यो असन्तुलित व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धले समृद्धि कसरी बोकेर हिड्ने हो त ?
यो र यस प्रकारका आर्थिक कार्यक्रमहरूको अस्पष्टता न समाजवादको सूचक हो, न पुँजीवादको, यो त संसदीय सर्वसत्तावाद हो । राजनीतिक पार्टीहरूसँग राजनीतिक कार्यक्रम नै छैन । उनीहरू केवल सत्ताको गोरेटो खन्न बिना इन्जिनियर आफै डोजर चलाउँछन । विवेकशील साझा पार्टीले आफूलाई मध्यपन्थी राजनीतिक पार्टी भन्छ । यसको अर्थ उसले संसदीय बाटो खन्ने आवश्यकता अनुसार डोजरलाई दाया वा बाया काट्ने छ । अरूले नभने पनि मूलधारका भनिएका सबै दलहरूको राजनीतिक तरिका यही बनेको छ ।
यसैले गोविन्द केसीको आन्दोलनमा अपनाइएको भिन्न भिन्न पार्टीको रुखले उनीहरूको त्यस प्रकारको संसदीय सर्वसत्तावादलाई उजागर गरेको छ । राजनीतिक दलहरू न समाजवादी छन्, न पुँजीवादी नै, यिनीहरू त संसदीय सर्वसत्तावाद वा मध्यपन्थी अवसरवादको एउटा पानीजहाजमा तैरिरहेका छन् । जसरी संसदीय लोकतन्त्रको ७० वर्षसम्म पनि समाजवादी संविधान भइकन छिमेकी भारत भोक र मध्ययुगिन सामाजिक अवस्थासँग लड्नका लागि हाम्रोभन्दा सय गुणा ठुलो अर्थतन्त्रको उपयोग गर्न असफल छ, के हाम्रो पनि अबको ७० वर्षे मार्ग यही हो ? होइन भने फरक के हो त ? यी यक्ष प्रश्न नेपाली राजनीतिले यथाशीघ्र हल गरोस् ।